phone sim unlock လုပ်ချင်သူများအတွက် ~ မိုးညိုသား
4:04 PM sim unlock လုပ်နည်း No comments
sim unlock code ကိုတွက်ချက်ပေးမဲ့software.....လေးပါ....တန်ဖိုးအရမ်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ....ပုံမှန်ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ ဦးဏှောက်နဲ့ တော်တော်လေး တွက်ချက် ရမဲ့ အဖြေကို တစ်ထိုင်တည်း ရှာပေးမဲ့ ဆော့ ဝဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်.....မိမိတို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို လည်း အွန်လိုင်းကနေ ဒီ ကောင်လေးကိုအသုံးပြုပြီး အကူအညီပေး နိုင်ပါပြီ...ပုံမှန်ဆိုရင်တော့sim unlock လုပ်တာ နိုင်ငံခြား ဆိုဒ်တွေမှာ ဒေါ်လာ ကိုသောက်သောက် လည်အောင်တောင်းပါတယ်....ကျွန်တော်ကတော့ ဖရီးအနေနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်...အသုံးပြုပုံလေးကို တစ်ခါတည်းပါ ဖော်ပြပေးထားတာမို့ ....အသုံးပြု လိုတယ်ဆိုရင် အောက်မှာဒေါင်းလုပ်ယူကြပါ...ဒီနေရာမှာ SIM LOCK ဆိုတာနားမလည်သေးတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော် ဘလော့ မှာအသေးစိတ်ရေးထားတာလေးကို ဒီမှာ ဝင်ဖတ်ပေးပါ။
လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ ကတော့ 
1 . ROOT လုပ်ထားရပါမယ်။
2. အရင်ဆုံး sim unlock လုပ်ဖို့ အတွက်Android Terminal Emulator ကိုအရင် ဒေါင်းထားပါ။
3. မိမိတို့ဖုန်းကို *#06# ကိုနိုပ်ပြီး IMEI နံပါတ်ကိုရှာပေးပါ
UN LOCK CODE ကိုတွက်ချက်ပုံ
Terminal Emulator app ကိုဖွင့် ပြီး
strings -n 8 /dev/block/mmcblk0p6[enter] ကိုနိုပ်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိရဲ့IMEI
နံပါတ်ပါတာတစ်ခုကိုတွေ့ ရပါလိမ့် မယ်... [ဥပမာ] UN_Lock_code = 063312345
ဒါဆိုရင်တော့....UNLOCK ကုဒ်ရပါပြီ။......
SIM UNLOCK လုပ်ပေးမဲ့လိုအပ်တဲ့ ဆော့ ဝဲကိုဒေါင်းရန်
ဒီဆော့ ဝဲလေးကို မိမိတို့pc မှာ install လုပ်ထားပေးပါ...ဖုန်းနှင့် ချိတ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ...
အပေါ်က UN LOCK CODE နေရာမှာမိမိတို့ ရရှိထားတဲ့ ကုဒ်ကို ဖြည့် ပေးလိုက်ပါ..အောက်မှာ IMEI နံပါတ်ကို နောက်ဆုံး ( ၇ ) လုံးကိုထည့် ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် OK နိုပ်တာနှင့် .....အောက်မှာ SIM UNLOCK ကုဒ်ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့် မယ်....
မိမိတို့ ဖုန်းကို SIM UNLOCK လုပ်ဖို့ အတွက်ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်ပြီး SIM CARD
ကိုထုတ်လိုက်ပါ။။။ နောက်မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့SIM CARD ကိုထည့်လိုက်ပါ...ပြီးရင် အပေါ်က ရထားတဲ့ 
SIM UNLOCK ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့် ပေးလိုက်ပါ........ဖုန်း REBOOT
ကျပြီးပြန်တာလာတာနှင့် မိမိတို့ ဖုန်းကိုအသုံးပြုလို့ ရပါပြီ...
ဒီပိုစ်လေးကို အမြဲသိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။
အသစ်တင်တိုင်း FACEBOOK ကနေအားပေးမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ LIKE လုပ်ပေးပါ။